गजराज आफ्नो टाउकोको हड्डी डिब्बामा बोकेर दुबईबाट नेपाल फर्किए - Maxon Khabar
Home / News / गजराज आफ्नो टाउकोको हड्डी डिब्बामा बोकेर दुबईबाट नेपाल फर्किए
गजराज आफ्नो टाउकोको हड्डी डिब्बामा बोकेर दुबईबाट नेपाल फर्किए
गजराज सुवेदीको शरीर अरुकै जस्तो सामान्य छ । तर उनको टाउको असामान्य रहेको छ । उनको टाउकोको बायाँपट्टिको भागमा खाल्डो छ । त्यो खाल्डो परेको भागको हड्डी चाहिँ उहाँले बट्टामा बोक्नु भएको छ ।
टाउकोको हड्डी बट्टामा बोक्ने उनको घर दाङ देउखोरीको गढवाचोकदेखि झण्डै ७ किलोमिटरको दूरीमा रहेको भोजपुर गाउँमा हो । परिवारका लागि कमाउन विदेश जानुपर्ने उहाँको बाध्यता थियो ।गजराज पढ्दै गर्दा बुवा कमाउन भारत जानुभएको थियो तर २०६२ सालमा कमाउन भारत गएका बुवा फर्किनु भएन , उतै बेपत्ता हुनुभयो ।
त्यसपछि गजराज र भाइ रमेशको पढाई १० कक्षाभन्दा माथि जान सकेन । दाजु भाइले नै बिहे गरेपछि परिवारको सदस्यको थपियो । गजराजका2सन्तान पनि भएपछि परिवारको संख्या7पुग्यो ।2सन्तानको शिक्षाको जिम्मेवारीसमेत थपिएपछि छरछिमेकबाट ऋण लिएर १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाएर उनी 2074 पुष 10 गते दुवई उड्नुभयो ।
काम थियो वायर हाउसमा फ्रिज' र 'एसी लोड अनलोड' गर्ने । ऋण तिरेर घरबाट जाँदाका सपना पूरा गर्न गजराज मेहनत गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तर १ वर्ष नपुग्दै गएको असोज ३० गते आफू बस्ने कोठामै ओछ्यानबाट लड्नुभयो । त्यही दुर्घटनाले टाउकोबाट बायाँपट्टिको हड्डी फुट्यो । अस्पतालले उपचारका क्रममा टाउकोको हड्डी निकालिदियो । कम्पनीले केही उपचार मात्र गरिदिएपछि उहाँ टाउकोको हड्डी डिब्बामा बोकेर नेपाल फर्किनु भएको छ ।
यसरी भएको थियो उहाको दुर्घटना
डिउटीबाट बाट फर्किएर दाह्री काट्ने मेसिन लिन ओछ्यानमा चढ्न खोज्दा गजराजको खुट्टा अचानक फलामको भर्‍याङबाट चिप्लियो । नजिकै रहेको काठको बाकसमा टाउको बजारिँदा बेहोस भएका उनलाई कामबाट फर्किए पछि भेटेका साथीहरुले अस्पतालमा पुर्‍याए का थिए ।
२० दिन अस्पतालमै बसेका उनलाई ३ दिन आसीयूमा उपचार भयो । उपचार गर्दा झण्डै २८ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । त्यहाँ उपचार गर्दाको सबै खर्च कम्पनीले नै बेहोर्‍यो । टाउको बज्जारिंदा फुटेको टाउकोको बाँयातर्फको हड्डी अस्पतालले निकालिदिएको छ । अस्पतालले काम नगर्न भनेकोले गजराज बाँकी उपचार नेपालमै गर्ने सोचेर टाउकाको हड्डी बोकेर मंसिर ४ गते नेपाल फर्किनु भएको हो ।
उनलाई शिक्षण अस्पतालले हड्डी फुटेकाले बोन प्लाष्टर गर्नुपर्ने भन्दै माघ ४ जाँच गर्ने र ९ गते अप्रेसनको मिति दिएको छ । तर उहाँसँग अप्रेसनका लागि चाहिने १ लाख रुपैयाँ पनि नभएको बताए । विदेश जाँदा लिएको ऋण तिरेर कमाउन थाल्दा नै दुर्घटनामा परेपछि उहाँ अहिले समस्यामा हुनुहुन्छ । गजराजकी आमा गिरादेवीले हात जोड्दै भनिन ‘उपचार भएपछि केही गरेर खाने भैदियो राम्रो हुन्थ्यो । उपचारका लागि सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा छ ।’
डा. भन्छन कृत्रिम हड्डी हाल्न मिल्छ
टाउकोको हड्डी फुटेर निस्किँदा पनि मान्छे कसरी बाँच्न सक्छ भनेर धेरै जना आश्चार्यमा पर्नुभएकै होला तर वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. बसन्त पन्तका अनुसार टाउकोको हड्डीको काम मस्तिष्कलाई जोगाउने मात्र हो । हड्डी निस्किँदैमा ज्यानै जाने र फेरि त्यही हड्डी टाउकोमा राख्न नमिल्ने पनि होइन ।
तर टाउकोको हड्डीलाई विशेष रुपमा पेटभित्रै राख्नुपर्छ । उनको हड्डी भने डिब्बामा राखिएकाले त्यसले काम नगर्ने र कृत्रिम हड्डी राख्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । टाउकोको हड्डी नहुँदैमा सामान्य रुपमा हिँड्डुल गर्न समस्या नभएपनि सहजताका लागि अप्रेशन गरेर कृत्रिम हड्डी राख्नुपर्ने डाक्टर पन्त ले बताउनुभयो । Watch Video :